WhatsApp အုပ်စုများ ? WhatsApp အုပ်စုများသို့ ၀ င်ပါ
WhatsApp အဖွဲ့များ။ Whatsapp ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးမိုဘိုင်း application ဖြစ်သည် WhatsApp အဖွဲ့များ အသုံးပြုသူများကိုတတ်နိုင်မှဖန်တီးခဲ့ကြသည် သူငယ်ချင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောပါ အချို့သော themes များ, အရသာသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအပေါ်။
ကျနော်တို့ပြုစုပါပြီ အကောင်းဆုံး Whatsapp အုပ်စုများ စာဖတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအုပ်စုတွေကိုပူးပေါင်းနိုင်အောင်။
1 WhatsApp ကိုအုပ်စုများ: အပြီးအစီးလမ်းညွှန်
2 WhatsApp အုပ်စုများဆိုတာဘာလဲ။
3 WhatsApp အုပ်စုများကိုဘယ်လိုပူးပေါင်းရမည်နည်း။
4 WhatsApp အုပ်စုများကိုဆက်သွယ်သည်
4.1 WhatsApp အုပ်စုများသို့ချိတ်ဆက်မှုများဘာတွေလဲ။
5 WhatsApp အုပ်စုများကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
6 WhatsApp အုပ်စုများကိုအသံတိတ်ရန်။
7 WhatsApp ကိုဘယ်လိုထားခဲ့မလဲ။
7.1 WhatsApp အဖွဲ့ကိုသတိမပြုမိဘဲထားခဲ့လို့ရမလား။
8 WhatsApp အဖွဲ့များကိုဆက်သွယ်ပါ
9 WhatsApp ကိုအုပ်စုဖွဲ့ link ကိုဖန်တီးပါ
WhatsApp ကိုအုပ်စုများ: အပြီးအစီးလမ်းညွှန်
ဒီစာမျက်နှာက WhatsApp အုပ်စုများကိုလမ်းညွှန်ပြီးပါပြီ။ ဒီမှာသင်သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ် အုပ်စုများကိုပူးပေါင်းပါဝင်ပါ သူတို့ကိုလုံးလုံးကျွမ်းကျင်သူတို့ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်။ သင်တစ် ဦး ကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည် ပူးပေါင်းရန်အကောင်းဆုံး WhatsApp အုပ်စုများနှင့်အတူစာရင်းအပြည့်အစုံ, themes များဖြင့်ခွဲခြား။ အကယ်၍ သင်သည်ဤလမ်းညွှန်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ရှုလို။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုစတင်လေ့လာလိုပါက \_ t သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Whatsapp Group မှရှာဖွေသူ
WhatsApp အုပ်စုများဆိုသည်မှာ WhatsApp မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုစကားပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်ဖန်တီးနိုင်သည် အချို့သောဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ်တွင်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများအကြား။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိသည် ပုံမှန် WhatsApp ကိုအုပ်စုများ မိသားစုအုပ်စု၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားအုပ်စု၊ ဘောလုံးအသင်းအုပ်စု၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေညနေခင်းတွေ့ဆုံပွဲများကဲ့သို့…။ သို့သော် WhatsApp ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအပေါ်အုပ်စုများကိုဖန်တီးပါ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအသုံးပြုသူများကိုလူများအားတွေ့ဆုံရန်၊ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေရန်နှင့်အုပ်စု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက် WhatsApp အုပ်စုတစ်ခုဖန်တီးပါသူအုပ်စုတွင်သူရွေးချယ်လိုသည့်သူများကိုသူထည့်လိုသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းထဲသို့ထည့်ပါ။ ယခုအချိန်အထိမည်သူမဆိုသင့်ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုဘဲသတ်သတ်မှတ်မှတ် WhatsApp အုပ်စုထဲကိုထည့်သွင်းနိုင်သည် Whatsapp သင်သည်အုပ်စုအသစ်တစ်ခုသို့မထည့်သွင်းမီတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရန်လိုအပ်သည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ အုပ်စုတစ်ခုတည်ထောင်သောအခါအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ထိုအဖွဲ့ထဲဝင်ရန်အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်အုပ်စုလိုက်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်သင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအုပ်စုများကိုသင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
WhatsApp အုပ်စုများ၏လင့်များသို့မဟုတ်လင့်ခ် ၄ င်းတို့သည် (ငါပြောခဲ့ပြီးသောအတိုင်း) အုပ်ချုပ်သူများမျှဝေထားသော link များဖြစ်ပြီးအခြားသူများကထိုအုပ်စုတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး ၏စီမံခန့်ခွဲသူမှန်လျှင် WhatsApp အဖွဲ့ မင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်မှာမင်းလုပ်နိုင်တာကမင်းလုပ်နိုင်တယ် အခြားလူများကိုဖိတ်ကြားရန်ထိုအုပ်စုထံမှ link ကိုရယူပါ အောက်ပါအဆင့်များဖြင့် -
ကိုနှိပ်ပါ မျှဝေရန် ထိပ်မှာ။
ထို option ကိုရွေးချယ်ပါ "လင့်ကိုမျှဝေပါ" ဒါမှမဟုတ် option ကို "လင့်ခ်ကိုကူးယူပါ".
သငျသညျစိတ်ဝင်စားလျှင် WhatsApp အုပ်စုတစ်ခုဖန်တီးပါအောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကိုနှိပ်ပါ "အဖွဲ့ဖွဲ့ပါ" သင့်ရဲ့ Whatsapp application ရဲ့ထိပ်မှာ။
သင်၏အဆက်အသွယ်များထဲတွင်အုပ်စုလိုက်ပါ ၀ င်သူများကိုထည့်ပါ "နောက်လိုက်".
အုပ်စုအမည်နှင့်အုပ်စုအတွက်ဓါတ်ပုံထည့်ပါ။ ကိုနှိပ်ပါ "ဖန်တီး".
ဒါလုပ်ပြီးပြီ၊ သင့်ရဲ့ WhatsApp အုပ်စု link သို့မဟုတ် link ကို လှိုဏ်ဂူ
မတူညီသောအုပ်စုများမှ WhatsApp ကိုအဆက်မပြတ်လက်ခံရရှိသောအခါတခါတရံတွင် WhatsApp အသိပေးချက်များ၏အသံသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုသင်တတ်နိုင်သမျှကတည်းကလွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ် သင်၏ WhatsApp အုပ်စုများကိုအသံတိတ်ပါ။ မသန်စွမ်း တစ် ဦး whatsapp အုပ်စုတစ်စုအသံ, သင်ရုံရန်ရှိသည်:
သင်နှုတ်ပိတ်လိုသည့် WhatsApp အုပ်စုကိုထည့်ပါ။
ထို option ကိုရွေးချယ်ပါ "တိတ်ဆိတ်ခြင်း".
အသံတိတ်အကြား option ကိုရွေးချယ်ပါ "၈ နာရီ"၊ "၁ ပတ်" o "1 နှစ်"။
အခြားသောနည်းလမ်း အုပ်စုတစုကိုအသံတိတ် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
WhatsApp ကိုထားခဲ့ပါ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် သင်ရုံ:
သင်သည် WhatsApp အုပ်စုကိုအခြားပါ ၀ င်သူများ၏သတိမပြုမိဘဲထားခဲ့လိုပါကယခုအချိန်တွင်ဤကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းသင့်ကိုပြောရန်စိတ်မကောင်းပါ။ သင်အဖွဲ့မှထွက်ခွာသောအခါကျန်အဖွဲ့သည်သင်အဖွဲ့မှထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ Whatsapp အုပ်စုများသို့ဆက်သွယ်ပါ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
ရှာဖွေမှုများကိုရှာဖွေကြည့်ရှုရန်သာလိုအပ်သည် WhatsApp အုပ်စုများထုတ်ဝေခဲ့သည် သင်ပါ ၀ င်လိုသည့်အဖွဲ့ကိုတွေ့သောအခါပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "အုပ်စုလင့်ခ်"။ Whatsapp ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးသင်ဤအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလိုကြောင်းအတည်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
WhatsApp ကိုအုပ်စုဖွဲ့ link ကိုဖန်တီးပါ
သင်မတွေ့ပါက WhatsApp အဖွဲ့ သင်ရှာဖွေနေသည်၊ သင်တန်းသားများကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ platform ပေါ်တွင်မျှဝေရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ယခုသင်လုပ်နိုင်သည် WhatsApp ကိုဖန်တီးပြီးထုတ်ဝေပါ။